I-Kirin 990 iya kuba ne-5G ebandakanywe ngokwendalo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwiveki ephelileyo kwabhengezwa ukuba iKirin 990 iza thaca ngokusemthethweni kwi-IFA 2019. Imalunga nayo Inkqubo entsha yeHuawei.
EBerlin sele kukho uthotho lweepowusta malunga nokuxhonywa kweKirin 990, apho kutyhilwe into ebalulekileyo kumqhubekekisi, ebikhe yahletywa iiveki. Iprosesa iza kuza ne-5G yemveli idityanisiwe. Iya kuba sisixhobo sokugqibela esine-5G yemveli.
Xa iindaba zaphuma ezibanga ukuba uphawu izakukhupha iiprosesa ezimbini zokugqibela eziphezulu kulo nyaka, bekucingelwa ukuba enye yazo iza ne5G idityanisiwe ngokwendalo. Ngoku kubonakala ngathi iKirin 990 yeyona ikhethiweyo kule nkalo. Ke ubukho be-5G kuyo buqinisekisiwe ngale ndlela.
Nangona okwangoku kunganikwanga zinkcukacha. Kuya kufuneka silinde intetho yayo esemthethweni ngalo Lwesihlanu ukuze sazi yonke into ngale processor intsha yohlobo lwesiTshayina. Njengoko izakuba nemodem ye5G edibeneyo, nangona kungaziwa ukuba iya kuba yi-Balong 5000 esele siyazi.
I-Kirin 990 iya kuba ngale ndlela iprosesa yokuqala yokufika kwintengiso ngale 5G ngokwendalo. Okokuqala ukufika, nangona kungengowokuqala ukwaziswa, ukusukela kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo Isamsung yazisa i-Exynos 980 ngokusemthethweni, ukuba ine-5G ngokwendalo. Kodwa ayaziwa ukuba iifowuni ezinale chip evela kuphawu lwaseKorea ziya kufika nini.
Endaweni yokuba yonke into icebise oko iya kuba ngumlingani weHuawei Mate 30 osebenzisa iKirin 990. Ukuba yinyani, ngekhe silinde ixesha elide ukudibana nabo. Ukusukela kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwaqinisekiswa ukuba olu luhlu luphakamileyo luya zikhona ngoSeptemba 19 ngokusemthethweni. Ke kwiiveki ezimbini siza kuphuma kumathandabuzo nangayiphi na imeko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Huawei » I-Kirin 990 iza ne-5G eyakhiwe ngokwasekhaya
I-Instagram Music ifikelela kumazwe aliqela aseLatin America: Sichaza indlela yokwenza uninzi lwayo